UYIBOPHA NJANI ITIE: INYATHELO ELILULA NGENYATHELO NGEVIDIYO - IFASHONI
Eyona Ifashoni Ungayibopha njani iThayi: I-7 Knots yazo zonke izihlandlo
Ungayibopha njani iThayi: I-7 Knots yazo zonke izihlandlo
Awuqinisekanga ukuba ubopha njani iqhina? Landela imiyalelo yethu ngamanyathelo ngamanyathelo ngendlela yokubopha amaqhina ahlukeneyo kubandakanya iWindsor kunye neWindsor ephindwe kabini. Ukuhlaziywa kwe-Sep 16, 2020
Nokuba yeyamashishini okanye yezihlandlo zentlalo, ii-ensembles ezithile zikhangeleka ngcono ngetayi. Ngaphantsi kwekhola yehempe kunye neqhina emqaleni, iqhina elithe tye lizisa inqanaba lobungcali kunye nobuhle kwisuti, ivesti, okanye ihempe kunye neebhulukhwe. Nangona ii-clip-on ties zinokubonakala njengeyona ndlela ilula, izibophelelo ezibotshelelwe ngesandla zezona zikhetho zinomtsalane. Ukwazi indlela yokubopha iqhina kungavula inani lezitayile ezintsha kunye nokubonakala. Ngamaqhina amathandathu amaqhina onokukhetha kuwo, kukho into nganye esayizi yentamo kunye nesitayile sehempe. Ukuba ukhetha iqhina elilula, sicebisa ukuba uqale nge Windsor epheleleyo. Indlela yethu yokubopha iividiyo zethayi kunye nemiyalelo elula ivumela amadoda nabafazi ukuba badlale umdlalo opholileyo ngemizuzu. Abantu kufuneka baziqhelanise nokudibanisa amaqhina phambi kwesipili kwiziphumo ezilungileyo.
Uyibopha njani iWindows Windsor Knot
Ifaka imilo engunxantathu emenyezelisiweyo, iqhina laseWindsor linika ukhetho olufanelekileyo kudliwanondlebe lomsebenzi, iintetho kunye nezihlandlo zentlalo. Ngenxa yokubonakala kwayo ngokubanzi, eli qhina libukeka lihle ngehempe esasazekayo. Nangona kunokubonakala kunzima, ukubopha iqhina elipheleleyo leWindsor kufezekisiwe ngaphandle kobunzima obukhulu.
Ukuqala ukubopha iqhina elipheleleyo leWindsor, phakamisa ikhola yehempe kwaye uyijube iqhina entanyeni, ukuze isiphelo esibanzi sibe kwicala lasekunene kwaye sandise malunga nee-intshi ezili-12 ngezantsi kwesiphelo esincinci.
Nqumla indawo ebanzi yetayi ngaphaya kwenxalenye emxinwa.
Tsala ububanzi obugqityiweyo ngokuvula entanyeni, emva koko wehle.
Dlulisa ukuphela okubanzi ngaphantsi nangakwesokudla kwesahlulo esincinci kunye necala elingalunganga elijonge ngaphandle.
Canda indawo ebanzi ngaphaya nangasekhohlo kwesahlulo esincinci kwaye icala elifanelekileyo lijonge ngaphandle.
Tsala ububanzi obugqityiweyo ngokuvula entanyeni.
Xa uyihlisa, yigqithise kwiluphu ngaphambili.
Ukubamba iindawo ezijingayo ngesandla esinye, tyibilikisa iqhina ngononophelo ujonge ikhola ngesinye isandla kude kube kukugungxula, uze wehlise ikhola.
Uyibopha njani iHalf Windsor Knot
Ukuqonda indlela yokwenza iqhina kungakunika ubutyebi bezinto onokukhetha kuzo xa ulungiselela. Umahluko wandisa ngakumbi amathuba. Isiqingatha seWindsor knot sinika ubume obunxantathu kunye nobulinganayo kumboniso weklasikhi. Ngenxa yokuba incinci kuneWindsor epheleleyo, isebenza ngcono ngobubanzi, amaqhina obunzima obuphakathi kunye nezibini kakuhle nayo nayiphi na ihempe yokunxiba. Ngemiyalelo embalwa elula, isiqingatha se Windsor knot sihlangana ngokulula.
Njengamaqhina apheleleyo eWindsor, qala inkqubo ngokunyusa ikhola yehempe. Qhoboshela iqhina entanyeni ukuze isiphelo esibanzi sibe ngasekunene kwaye sandise malunga nee-intshi ezili-12 ngezantsi kwesiphelo esincinci.
tsiba iisilingi zetrowel
Nqumla icandelo elibanzi ngaphaya kwesahlana esimxinwa.
Nqumla indawo ebanzi ngasemva kwecandelo elimxinwa ukuze icala elingalunganga lijonge ngaphandle.
Zisa ukuphela okupheleleyo nangaphezulu ngasekhohlo.
Yitsale ngokuvula entanyeni ukuze ibeke icala elingalunganga liye ngasekunene.
Yizisa isiphelo esibanzi ngaphezulu kwenxalenye emxinwa ukusuka ekunene ukuya ekhohlo kwicala lasekunene elijonge phezulu.
Zisa ukuphela okupheleleyo ngentambo yentamo kwakhona.
Xa uyihlisa, yifake kwilogu engaphambi kwekhola.
Lungisa iqhina ngokulityibiliza phezulu ngesandla esinye kwaye ubambe imisila ngesinye.
Yehlisa ikhola yehempe ukugqibezela ukujonga.
Uyibopha njani i-Innot-in-Hand Knot
Iqhina lesandla esine lisebenza kakuhle kwiintambo ezibanzi kwiindwangu ezinzima. Funda indlela yokwenza iqhina kule ndlela ukuba unethemba lokunxiba inkangeleko yemveli. Ijongeka inomtsalane xa inxitywe ngehempe yokunxiba esemgangathweni esemgangathweni. Ngamanyathelo ambalwa alula, abantu banokubopha iqhina lesandla-kwimizuzu nje embalwa.
Ukugqibezela eli qhina, phakamisa ikhola yehempe kwaye uyijube iqhina entanyeni ukuze isiphelo esibanzi sibe kwicala lasekunene kwaye sandise malunga nee-intshi ezili-12 ngezantsi kwesiphelo esincinci.
Yiza nenxalenye ebanzi yetayi kwindawo emxinwa.
Emva koko ungenise indawo ebanzi phantsi kwecandelo elimxinwa.
Buyisela icala elibanzi ngapha nangapha kwenxalenye emxinwa.
Yizisa icala elibanzi phezulu ngentambo enkulu entanyeni.
Ngokubamba ngokukhululekileyo kwiqhina, faka isiphelo esibanzi kwicala elisezantsi ngokusebenzisa iluphu engaphambili.
Ukubamba indawo emxinwa ezantsi yetayi ngesandla esinye, tyibilikisa iqhina phezulu nelinye kude kubecocekileyo kwaye kube kuhle. Yehlisa ikhola yehempe ukugqibezela ukujonga.
Uyibopha njani into yoBathathu Emnye
Njengoko ufumana ukonwaba ngakumbi kunye neziseko zendlela yokubopha iqhina, unokuthweswa isidanga kukhetho olunobunkunkqele. Iqhina likaBathathu Emnye linikezela ngenkangeleko yesitayile emva kwesimboli yoBathathu Emnye. Ngoyilo oluntsonkothe ​​ngakumbi kuneWindsor kunye namaqhina amane asesandleni, ukubopha iqhina likaZiqu-zintathu kuyinto encinci ngakumbi, kodwa yenza ingxelo yefashoni kwimisebenzi esesikweni.
Ukubopha iqhina likaZiqu-zintathu, phakamisa ikhola yehempe kwaye uyijube iqhina entanyeni kunye nomphetho obanzi oxhonywe kwicala lasekunene, ngaphezulu kwenkaba.
Ngaphantsi nje kwekhola, tywina icala elibanzi leqhina iindlela ezinde zokwenza i-dimple kwilaphu.
Thatha le ndawo ibhityileyo uyinqumle ngaphaya kwenxalenye eshinyeneyo.
Yizisa isiphelo esincinci esincinci ngokuvulwa kwentamo.
Yibuyisele phantsi ngasekunene.
Yinqumle phantsi kwenxalenye eshinyeneyo yethayi kwaye kwelinye icala, icala elingalunganga phezulu.
Zisa isiphelo esimxinwa.
Yitsale ngokuvula kwentamo kwaye ngasekunene wenze ubume bentliziyo.
Yigudluze kubume bentliziyo kwaye uyinyuse ngentambo yentamo.
Yitsale ngeqhina, ugcine iluphu ephezulu yeqhina likhululekile.
Emva koko uyihambise emva kwenxalenye eshinyeneyo uye kwelinye icala.
Zisa isiphelo esifutshane ngoku kwaye ngokusebenzisa iluphu evulekileyo.
Lungisa iqhina lokuqina kunye nolingano kwaye ubeke isiphelo phantsi kwentloko. Songa phantsi ikhola yehempe ukujonga okugqityiweyo.
Uyibopha njani iPratt Knot
Ikwayaziwa njengeqhina likaShelby, iqhina likaPratt linikezela ngenkangeleko yesitayile kuyo nayiphi na ihempe enxitywayo. Ngenxa yokuba eli qhina lincinci kuneqhina leWindsor, lisebenza kakuhle xa lenziwe ngobunzima obungaphantsi ukuya kubunzima obuphakathi. Iqhina likaPratt lifuna amanyathelo nje ambalwa okuba yinkosi.
Ukuqala ukubopha iqhina likaPratt, phakamisa ikhola yehempe kwaye ubambe iqhina elingalunganga phezulu kunye nesiphelo esibanzi esixhonywe kwicala lasekunene malunga nee-intshi ezili-12 ezantsi kunesiphelo esincinci.
Nqumla indawo ebanzi yetayi phantsi kwenxalenye emxinwa.
Yizisa isiphelo esibanzi kwaye usikhulule ngokuvula entanyeni kwaye uqinise.
Nqumla umgca obanzi uye ngasekunene kwicala lasekunene elifanelekileyo.
Yitsale phezulu ngokuvula kwentamo.
Yizise phantsi ngeqhina leqhina.
Isilayidi kwaye uhlengahlengise iqhina ngobunono kwaye uyithobe ikhola yehempe ukugqibezela inkqubo.
Uyibopha njani uKelvin Knot
Eli qhina lingaqhelekanga ngokuqinisekileyo liyakukubeka ngaphandle kwesihlwele. Ngombulelo, amaqhina kaKelvin kulula ukuwafunda kwaye enze nokujonga okukhazimlisiweyo. Landela amanyathelo ambalwa asisiseko, kwaye uya kuba yingcali yeqhina likaKelvin ngaphandle kwexesha.
Izicwangciso zangoku zepergola
Qhobosha iqhina lakho ujikeleze ikhola yakho kunye nomphetho kunye nesiphelo esityebileyo ngasekhohlo kwakho. Hlanganisa isiphelo sakho ngeesentimitha ezimbini okanye ezintathu ngaphantsi kunokuba unethemba lokugqiba intambo.
Nqumla isiphelo esityebileyo phantsi kwecala elincinci elishiyekileyo ukukhwela. Kuya kufuneka wenze i-X phantsi kwesilevu sakho. Zisongele ujikeleze isiphelo esincinci kwaye ubuye umva phantsi kweqhina ukusuka ngasekhohlo uye ngasekunene uzise isiphelo esingqindilili esithe tyaba ngapha nangapha ngaphambili usiya ngasekunene uye ngasekhohlo. Tuck umnwe phantsi kwebhendi ethe tye oyenzileyo Tuck isiphelo sakho esityebileyo phantsi kweluphu ejikeleze ikhola yakho.
Zisa isiphelo sakho esijiyileyo ngokusebenzisa iluphu ethe tyaba. Snug iqhina phantsi endaweni.
Qinisa ngokubamba iqhina ngesandla esinye kwaye utsala isiphelo esincinci kunye nesinye.
Uyibopha njani iEldredge Knot
Ngoyilo oluntsonkothileyo, iqhina lase-Eldredge lenza ingxelo ebhaliweyo. Isilumkiso esifanelekileyo: ukufunda indlela yokwenza iqhina kolu hlobo kunokuthatha ixesha. Ngelixa ukubopha eli qhina kubandakanya amanyathelo ahlukeneyo, inkqubo ayinzima njengoko ibonakala. Ngelixa amanye amaqhina enziwe ngenxalenye ebanzi yetayi, eli qhina lenziwe ngokupheleleyo ukusuka kwinxalenye emxinwa.
Ukuqala ukubopha iqhina lase-Eldredge, phakamisa ikhola yehempe kwaye uyilobe iqhina ukuze isiphelo esibanzi sibeke kwicala lasekunene nje ngezantsi kwenkaba.
Ncamathisela icala elingqindilili leqhina kufutshane nekhola ukwenza iindlela ezinciphileyo ezinde.
Yiza nenxalenye ebhityileyo ngaphezulu kwenxalenye eshinyeneyo yetayi.
Yiza nenxalenye ebhityileyo phantsi kwenxalenye eshinyeneyo yethayi, icala elingalunganga phezulu.
Yizisa icandelo elincinci ukuya entanyeni.
Yizise phantsi ngentamo yentamo ngasekunene, kwicala elingalunganga phezulu.
Ukuya ngasekhohlo, yithabathe ujikeleze ngaphambili kweqhina.
Thatha phezulu ngentambo yentamo.
Yibuyisele ezantsi ngasekunene.
Thatha emva kwenxalenye ebanzi yethayi ngasekhohlo, kwicala elingalunganga phezulu.
Yiyise ngaphesheya ngaphambili ngasekunene kwaye ngokusebenzisa iluphu eyenziwe kwinqanaba langaphambili.
Qinisa iqhina ngokutsala isiphelo esimxinwa ngasekunene.
Yizisa isiphelo ngokuthe ngqo kwaye ungene ngentamo yentsimbi ngasekunene kweqhina.
Kwakhona, yinyuse, ngaphezulu kweqhina ngasekhohlo kweqhina.
Ukugcina iqhina likhululekile, yiza nomsila omfutshane uye ngasekunene kwaye ngokusebenzisa iluphu eyenziweyo.
Tsala ukuze uqinise.
Tuck isiphelo emva kwentsimbi yomqala ngasekhohlo. Yehlisa ikhola yekhati ukuze ujonge kwaye ugqibe ukubukeka.
Iindidi zezixhobo zeNecktie
Ngaba ulangazelela ukuya ngaphaya kweziseko zendlela yokubopha iqhina? Amadoda okanye abafazi abanxibe amaqhina banqwenela ukuphucula ukusebenza kunye nefashoni ngezixhobo zethayi. Abantu banokukhetha kwiindidi ezahlukeneyo zezinto zokubopha ukugcina ubudlelwane busendaweni kwaye bongeze uphawu lwesitayile. Olu khetho lulungele nabani na onethemba lokuyila ukujonga utyikityo okanye ukuphakamisa ifashoni yabo yesiqhelo.
Ibha yokubopha: Izilayidi kwicandelo eliphakathi leqhina ukuze zigcinwe zikwindawo
Bopha ikliphu: Ukuncamathela kwindawo enye ngokusika kwindawo
Ukubopha: Faka ipini, isiseko kunye nekhonkco enceda ukugcina iqhina lingatshintshi
Iteyiphu yomtya: Iquka ibha kunye nokudityaniswa kwetyathanga
Umtya wokubopha: Utyibilika kwileyibhile emqolo wethayi kwaye unamathele kumaqhosha ehempe
Ngokubonisa ukujonga okukhazimlisiweyo ngomsebenzi okanye izihlandlo zentlalo, ii-neckties zonyusa ikhabethe lamadoda nabasetyhini. Amaqhina athe tye eza kuluhlu lweepateni, imibala kunye namalaphu ngalo lonke ixesha lonyaka nakwimeko, kwaye iintlobo ngeentlobo zamaqhina obotshi azigcina zikhangeleka zibukhali.
Inkqubo yoyilo yangasese
indlela yokwenza huppah
eyona ndawo iphumeleleyo yokuthandana kwindawo yomtshato
ilokhwe enye egxalabeni yeendwendwe zomtshato
uthenga ntoni kwishower yomtshato